परम सह Kildare खाना र पेय बाल्टी सूची - IntoKildare
पहिलो पटक भ्रमण, खाद्य र पेय
Kildare स्वाद र छनौट को एक स्वाद कली tastic तातो बर्तन मा बदलिएको छ, शीर्ष रेस्टुरेन्ट र बार को एक विस्फोट संग।
हामी स्पष्ट रूपले यहाँ ती सबै सूचीबद्ध गर्न सक्दैनौं तर हामी तपाइँलाई मात्र केहि तपाइँको बाल्टी सूची बाट टिक गर्न सक्नुहुन्छ!
चाहे यो एक सूप र एक स्यान्डविच खाजा वा चिया को एक कप च्याट मा केहि व्यवहार संग एक चिया को प्रकार हो, फायरकास्टल Kildare मा तपाइँ कभर भएको छ! हामी अत्यधिक Kildare मा हुँदा आफ्नो खाना बाल्टी सूची मा आफ्नो स्वादिष्ट Poké कटोरा थप्न सिफारिस गर्दछौं। उनीहरु प्रतिज्ञा गर्दछन् एक पटक तपाइँ यो प्रयास गर्नुहुन्छ तपाइँ धेरै को लागी फिर्ता आउनुहुनेछ र हामी तनमनले सहमत छौं!
Auld Shebeen (heatheauldshebeenathy) ले पोस्ट साझा गर्नुभयो।
हामी एक परम खाना र पेय बाल्टी सूची बनाउन र समावेश गर्न सकेन औल्ड शेबिन अथी मा। यी कस्ता स्फूर्तिदायक देखिन्छन्? उनीहरु अझ राम्रो स्वाद आफ्नो हस्तनिर्मित ढु B्गा बेक्ड पिज्जा वा प्रसिद्ध खस्ता चिकन पखेटा संग जोडा स्वाद, Auld Shebeen सबै चीज तपाइँ सही भोजन बाहिर को लागी आवश्यक छ।
Fallons of Kilcullen (@fallonsofkilcullen) ले पोस्ट साझा गर्नुभयो।
यहाँ पनीर प्रेमीहरु को लागी एक छ! फलोन, Kildare को प्रमुख मिशेलिन सिफारिश गरिएको खाना अनुभव भर्खरै बुर्राटा को यो शानदार पकवान sundrop र heirloom टमाटर संग आफ्नो आइतबार लंच मेनुमा थपिएको छ। Fallons न केवल एक शानदार रेस्टुरेन्ट हो तर यो पनि एक प्रभावशाली आउटडोर बार र बस्ने क्षेत्र छ।
दुई कुक रेस्टुरेन्ट र वाइन बार
TwoCooks (wtwocooks_sallins) ले पोस्ट साझा गर्नुभयो।
एक पति र पत्नी टीम द्वारा Sallins मा खाना पूर्णता डबल मा sated मतलब! यस रेस्टुरेन्ट मा मौसमी नियमहरु र मेनु मा सब्जीहरु र व्यंजनहरु, जो ताजा माछा देखि शाकाहारी विकल्पहरु को लागी विविध छ, सबै खुशी को गुड़िया संग सेवा गरीन्छ।
लक 13 ब्रू पब
एक निरपेक्ष क्लासिक, २० लक गर्नुहोस् क्रिस्पी आलुको खाल पिघलिएको डबलिनर रेड चेडर, क्रिस्पी आयरिश बेकन, वसन्त प्याज र मीठो मिर्च मेयोको एक गुडियाको साथमा भर्खरै किल्डारे को खाना र पेय बाल्टी सूची मा बनाउनु परेको थियो। Sallins मा स्थित छ, लक 13 ब्रू पब Kildare ब्रुइ Company कम्पनी को घर हो। किन तिनीहरूको प्याला एल्स, IPAs वा Lagers को साथ एक स्वादिष्ट व्यंजन जोडा छैन? एक अविश्वसनीय आउटडोर भोजन क्षेत्र को साथ, शराब की भठ्ठी पर्यटन र बियर स्वाद यो एक अनुभव हो कि याद गर्न सकिदैन!
AIMSIR (imsaimsir_restaurant) ले पोस्ट साझा गर्नुभयो।
यो २ मिशेलिन स्टार रेस्टुरेन्ट सेलब्रिजको लियोन्सको क्लिफको सुन्दर परिवेशमा अवस्थित छ। प्रतिभाशाली पति र पत्नी जोडी, जोर्डन र मजकेन बेच बेलीको नेतृत्वमा, एम्सिर पुन: खोलेको चार महिना पछि उनीहरूको मिशेलिन स्टार्सलाई सम्मानित गरियो। उपलब्ध विभिन्न अनुभवहरूको साथमा, तपाईंसँग आफूलाई र तपाईंको स्वादको लागि उपयुक्त छनौट गर्ने विकल्प छ। हामी वाचा गर्छौं कि यो एक अनुभव हो जुन बिर्सने छैन।
Cunninghams Bar & Rooms (@cunninghams_bar) द्वारा साझा गरिएको पोस्ट
सबै बाहिर जानुहोस् र कनिङ्घमको भोजन कक्षमा विलासितामा भोजन गर्नुहोस्। स्वादिष्ट थाई व्यञ्जनका साथै केही युरोपेली क्लासिक्सले भरिएको उत्कृष्ट मेनु। हामीलाई ककटेलमा सुरु नगर्नुहोस्! कनिङ्घमको भोजन कक्ष त्यहाँका सबै खानेकुराहरूका लागि नछुटाउनु पर्ने अनुभव हो।
Bread & Beer (@breadandbeer11) द्वारा साझा गरिएको पोस्ट
ऐतिहासिक २०० वर्ष पुरानो मुन हाई क्रस इनमा सेट गरिएको, रोटी र बियर एक पाक सपना छ। केही शानदार शाकाहारी विकल्पहरूको साथ विस्तृत मेनुसँग जोडिएको परम आरामदायक सेटिंग। हामी तिनीहरूको फूलगोभी रिसोट्टोलाई स्वादिष्ट तरकारी डिशको लागि सिफारिस गर्छौं!
Cooke's of Caragh (@cookesofcaragh1860) द्वारा साझा गरिएको पोस्ट
यदि समुद्री खाना तपाईंको चीज हो भने, हामीसँग तपाईंको लागि ठाउँ छ। झींगादेखि चाउडरसम्म सामनसम्म Caragh को खाना आधा गरेर काम नगर्नुहोस्। न्यानो गर्मीको साँझमा कुकको बार वा बियर पार्कमा एक गिलास वाइनको साथ आराम गर्नु अघि ग्यास्ट्रो लन्गुमा अनौपचारिक रूपमा खाना खानुहोस्।
Edward Harrigan & Sons (@harrigansnewbridge) द्वारा साझा गरिएको पोस्ट
Aperol खट्टा कसैलाई? जब यो ककटेलको कुरा आउँछ, यो भन्न सुरक्षित छ कि एडवर्ड ह्यारिगन र सन्स तिनीहरूको शिल्पमा विशेषज्ञ हुन्। परिवार, व्यवसाय, अनौपचारिक, विशेष घटनाहरू र निजी पार्टीहरूका लागि उपयुक्त एक शानदार मेनु सिर्जना गर्न स्थानीय आयरिश उत्पादनहरूको उत्कृष्ट प्रयोग गर्ने भएकाले तिनीहरूको खाना Kildare मा स्थानीयहरू बीच एक दृढ मनपर्ने हो।
पहिलो पटक भ्रमणखाद्य र पेय